Porn ကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုလွှမ်းမိုးစေသလား။ NoFap လှုပ်ရှားမှုကဒီလိုပဲတွေးတယ် - သင့် ဦး နှောက်က Porn On
NoFappers သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုမှန်ကန်ဆက်ဆံရေး၏ကုန်ကျစရိတ်မှာညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် warped ပြီဟုဆိုသည်။
ဒါဟာမကြာခဏကပြောသည်ရဲ့ porn drive ကိုနည်းပညာကူညီပေးသည်။ စူပါ 8 projector ကိုထွက်သွားသောအခါ, ညစ်ညမ်းဇာတ်ကားကိုပြသခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်လိုင်စင်ညစ်ညမ်းသဘောတူညီခဲ့သောကွောငျ့ကို VHS အကြီးအကျယ် Betamax နဲ့တူယှဉ်ပြိုင်စနစ်များကိုထွက် stomp နိုင်ခဲ့သည်။ နှင့်ဒီဗီဒီလွယ်ကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားများ၏ dirtiest အစိတ်အပိုင်းများမှခုန်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အမှုအရာကြောင့်လမ်းကြောင်းကိုချဆက်လက်နေကြသည်။ ယခုငါတို့ 10 စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအတွက်ညစ်ပတ်ဓာတ်ပုံများကြောင်း Self-ဖျက်ဆီးပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကလူ webcam အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကို diddle အကဲခတ်တစ်ဦးသို့လှည့်ထားသည် ဒေါ်လာဘီလျံစက်မှုလုပ်ငန်း။ နှင့်စအိုနှင့်နှစ်ဆစအို, လက်သီးနှင့်နှစ်ဆလက်သီး၏ kinky display တွေပဲကွာနှိပ်လိုက်ရင်နေကြသည်။ ဒါဟာပစ္စည်း porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာရှိဘယ်လောက်အံ့သြစရာပါပဲ။
၏သင်တန်း, ကောက်သောသို့စူးစမ်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း predate ။ ပိုရောင်စုံအချို့သည် Marquis က de Sade ၏အကျင့်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤအကးမျက်နှာပြင်မှစာမကျြနှာကနေခုန်တဲ့အခါမှာဒါအဘယျသို့ပြောင်းလဲ?
Fapping: တချို့ကညစ်ညမ်း-ကိုကူညီခဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စကားလုံးနုလှတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နိုင်သည်။ စကားလုံး ပထမဦးဆုံးထင်ရှားပေါ်ထွန်း ဒါကြောင့်ကိုခေါ်ဝဘ်ရုပ်ပြများတွင်အသုံးပြုအခါ 1999, ပတ်ပတ်လည် sexy အရှုံးသမား။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာဟူသောဝေါဟာရကိုတစ်ဦးအတွက်ပေါ်လာ Reddit ချည် အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရှောင်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆှေးနှေးသညျ့နရော။ ထိုအရပ်မှ "FAP" "NoFap" ဖြစ်လာသည်နှင့်လှုပ်ရှားမှုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းယခုနီးပါးတစ်သန်းအများစုနေထိုင်ပြီးအထီးအဖွဲ့ဝင်များမှစုစုပေါငျး။
လှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "NoFap သင်တန်းသားများကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအဘို့အညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရသောစိန်ခေါ်မှုများအိမ်ရှင်အဖြစ်။ " ဒါဟာ porn အတွက်အလွန်အကျွံပါဝင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအသက်တာ၌လေးနက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ခံစားရသောသူတို့အားကု သ. မရသော။
အဆိုပါ NoFap ချည်အပေါ်အများဆုံးမကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့အမည်များတစ်ခုမှာဂယ်ရီ Wilson က, anti-porn လှုပ်ရှားမှုမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူက "သည်, မိမိ Ted Talk ကိုအတွက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ပြဿနာကိုလေ့လာမဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ "သူလည်းဆိုက်ပြေး yourbrainonporn.com နှင့်မကြာသေးမီကအမည်ရ Kindle e-စာအုပ်ရေးသား Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ.
Wilson ကရဲ့အငြင်းအခုံအနည်းငယ်သိပ်သည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုသည်းခံ: ငါတို့မုဆိုးစုဆောင်းနှောက်ယနေ့အွန်လိုင်းရှိကွောငျးညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ Overload process ကိုမည်သို့မသိရပါဘူးပြောဆိုသော။ သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူအသစ်အဆန်း၏အယူအဆချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ သဘာဝလောကမှာရှိတဲ့သူတစ်ဦးအလားအလာမျိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းအဖြစ်, တိုင်းအမျိုးသမီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းပြသည်။ ယောက်ျားသည်မိန်းမအပေါ်သူ၏မျက်စိမသတ်မှတ်ရသောအခါဒီတော့သူ့ဦးနှောက်, သူမ၏ရှာတွေ့သူမ၏ fuck ဆိုတဲ့နှင့်သူမ၏ကိုယ်ဝန်ရရှိရန်သူ့ကိုပြောပြတယ်။ ဦးနှောက်ကြောင်းရည်မှန်းချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုကူညီ dopamine တစ်ဦးမြင့်တက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အသစ်အဆန်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပြသခြင်းသည်ကလစ်များဖြင့်ဖြစ်သည် Wilson ကသူမယောက်ျားသည် ဦး နှောက်ကို“ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုကိုထိမိပြီ” ဟုစဉ်းစားရန်လှည့်စားနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် ကလစ်တိုင်းကသူတို့ကိုမိန်းကလေးအသစ်ဆီခေါ်လာပြီး“ အခွင့်အလမ်း” အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာအကန့်အသတ်မဲ့ကမ္ဘာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေကဆက်ပြီးရှာကြတယ်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွေကိုအလွန်အမင်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်လာပြီးသူတို့ဟာပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးအသစ်သောပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။
Wilson က "rewired circuitry" ဒီလိုမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့မဟုတ်အရက်သမားကဲ့သို့အခြားစွဲမှာတွေ့ရှိဘာဆင်တူသည်ဟုဆိုသည်။ "တစ်ကလစ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းစွဲစေနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုပါတယ်။ ညစ်ညမ်း: ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူကပြောပါတယ်, ထိုဆိုးကျိုးများအဖြစ်ကြာမြင့်စွာထိခိုက်သူတွေကိုအားလုံးကျင့်ဆိုးများကိုအများဆုံးသုံးစွဲနိုင်အရှုံးမပေးရန်သဘောတူအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse နိုင်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းက ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသို့ပြန်ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟု NoFap အသိုင်းအဝိုင်းမှအချို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့“ fapstronauts” ဟုခေါ်ကြသည်။ လူတစ်ယောက်ကဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလုပ်တော့တဲ့အခါသူကယုံကြည်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့လိင်စိတ်တိုးပွားလာတာကိုဆုချပြီးပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုသင်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။
အဆိုပါ NoFap အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအများဆုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောကိစ္စများတစ်ခုမှာ, unsurprisingly, လိင်တံဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများသည်ယခင် fappers သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးစိုက်ထူရရှိမှသူတို့ကိုတားဆီးတောင်းဆို; ခက်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏နီးကပ်အပေါ်မှီခိုတဲ့။ သူတို့က ", porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဒီကိုခေါ်သို့မဟုတ် PIED။ အသုံးပြုသူ ObjectionYourHonor ရေးသားခဲ့သည်“ ငယ်ရွယ်တဲ့နှစ်တွေအထိလိင်မှုကိစ္စမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း (ကျွန်ုပ်၏အသက် ၂၃ နှစ်) သည်ရငျးနှီးမှုအတှငျးအခြိနျထိတှေ့မရခဲ့သောကွောငျ့၊ ငါ shit ပြီးတော့ fap လိုခံစားမိမှာပါ၊ အဲဒါကငါ့ကိုနေမကောင်းဖြစ်စေတယ်။ ငါထိန်းချုပ်မှုယူ။ ငါ၌ရှိသောနောက်လာမည့်ဆက်ဆံရေးသေချာစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ထိုမိန်းမအားအပြည့်အဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ငါ Viagra လိုအပ်နေလွန်းတယ်။
အဆိုပါအငြင်းအခုံဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပေါင်း B ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဘာသာအရာ, C တွင်သင်သည်နိုင်။ သို့သော်အချို့သော fapstronauts ဝန်ခံပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့, သိပ္ပံကွာဟချက်ရှိပါသည်။ ထိုအခါအချို့အချက်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့လိုလိုလားလားမရှိကြပေ။
ဒေါက်တာဒေးဗစ် Ley၏စာရေးဆရာ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှားအကြှနျုပျကိုကိုပြောတယ်, "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်း, ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစနစ်များကိုအသုံးပြုပေမယ့်ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းအငြင်းပွားမှုများထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်ဗီဒီယိုများအဖြစ်ဦးနှောက်လိင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, အလုပ်လုပ်တယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် porn သည်မည်မျှအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့် reductionistic အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံထားတယ် စသည်တို့ကိုရုပ်ရှင်, softcore သာရှိပြီးပြည်ပမှအမာခံ, နှိုင်းယှဉ်ကျမ်းစာ၌ရေးထား erotica ဤမျှလောက်ဒီရှေးရှေးအပေါငျးတို့သဝေးလာမည့်အချက်အလက်များ၏ဝေးငြင်းခုံနေကြကြောင်း, ဤအမှုအရာများနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းကိုမသိရပါဘူးရှိပါတယ်။ သူတို့ကငျြ့ဝတျယူဆချက်နှင့်အတူအငြင်းအခုံဝင်နေကြသည်သောကြောင့်, မှာအကောင်းဆုံး, စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသောသူတို့မျှော်မှန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့သုတေသနအတွက်, သူတို့ကမြင်ချင်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါ။ "
သူကအသိပညာနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများများ၏ကျူးကျော်မရှိခြင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကာကွယ်တားဆီးဖို့, [ယောဟန်သည်] Kellogg ထိုကဲ့သို့သော clitorectomies အဖြစ်ခွဲစိတ်ဘို့ငြင်းခုံများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏အသုံးပြုမှုနဲ့တူလူမျိုးကိုဦးဆောင်ကဘာလဲ, "မကောင်းပါ data တွေကိုသတိပေးလိုက်သည်။ အငြင်းပွားမှုများဤတူညီသောအမျိုးအစားများကိုရောဂါဖြစ်ခြင်းလိင်တူဆက်ဆံခြင်းမှဦးဆောင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြား nymphomaniacs ကိုခေါ်။ "
ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ချို့ယွင်းချက်ညစ်ညမ်းကျော်လွန်ကောင်းစွာတိုးချဲ့ကြောင်းပြောအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ အဲဒီညစ်ညမ်းပြဿနာများ၏ကိုယ်ပိုင် set ကိုတင်ပြမထားဘူးပြောမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးများက၎င်း၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးစွန့်ခွာနှင့်အမျိုးသမီးခိုင်ခိုင်လုံလုံပေါ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမရှိကြပေ။ အချို့သောအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်လူတွေကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏အိတ်ကပ်နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ လိင်လူကုန်ကူးမှု ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်ခံ။ သို့သော်ဤဆွေးနွေးပွဲများယေဘုယျအား NoFapping ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများကဲ့သို့အထီးဗဟိုပြုကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦး backseat ယူပါ။ ရပ်ရွာမကြာခဏပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ဦးအဖြစ်ကို "porn ပြဿနာ" ဘောင်ခတ်။ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ပတျသကျသောလူမှုရေးကိစ္စများတစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လူနိုင်စွမ်းမှဒုတိယရောက်လာသောအခါကသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်အရာကို Message ပေးပို့သနည်း?
ဒါဟာအများအပြား NoFap ခွဲထွက်အဖွဲ့အုပ်စုများကငျြ့ဝတျမြေပေါ်တွင်လည်ပတ်ကြောင်းကိုလည်းဟုတ်မှန်ပါပဲ။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းက XXX ကဘုရားကျောင်း 2006 ပြန်ပြသထားတယ် porn မှာကျမ်းစာထွက်လိုက်တာနဲ့စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထုတ်လက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 100,000 ကျမ်းစာ ကမ္ဘာတလွှား Sexpos မှာ။ သူတို့ကအခုအချိန်အထိကျမ်းစာ ၇၅၀၀၀ လောက်ကိုဝေငှခဲ့တယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် porn Effect ကိုကြွေးကြော်, "porn ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့စစ်တိုက်များတွင်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအစွမ်းထက်လက်နက်များဖြစ်ကြသည်။ "
ထိုလှုပ်ရှားမှုကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်“ ကျွမ်းကျင်သူ” များအဖြစ်ပြသရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာ NoFap ဝါသနာရှင် Gabe Deem က YouTube ချန်နယ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် reboot Nation porn စွဲသူ၏ပုံပြင်ကိုဝေမျှဖို့။ တဦးတည်းအတွက်ရံဖန်ရံခါ edited ဗီဒီယို, ယူဆပါသည်ယင်းမှတဆင့်ကြည့်ရှုသွားလာ "porn ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ဘယ်လိုဦးနှောက်သိပ္ပံ။ " ငါ့အသိပညာစေရန်, ယူဆပါသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာမဒီဂရီရရှိထားပါသည်။
ဤသည်ညစ်ညမ်းပတျဝနျးကငျြစိုးရိမ်မှုများထိပါးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကနေဒါသုတေသနပညာရှင်ကိုရှိမုနျ Lajeunesse အများဆုံးယောက်ျားလေးများထွက်ရှာသောတွေ့ရှိခဲ့ ညစ်ညမ်းပစ္စည်း (၁၀) နှစ်အရွယ်တွင်လူအများကစောစီးစွာညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသောအပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်ဤစိုးရိမ်မှုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ သတိရှိရှိထားရန်အရေးကြီးသည်
ပဋိညာဉ်တရားကိုမျက်လုံး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်အင်တာနက်တာဝန်ခံမှုအစီရင်ခံစာတွင်ကြည့်ရှုသည့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အသုံးပြုသူများကိုအားပေးသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်“ မသင့်လျော်သောနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသော link များကိုနှိပ်ရန်သွေးဆောင်ခြင်း” ကိုလျှော့ချရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်ခဲ့သူခရစ်ဟဗင် Porn Get မိန်းကလေးများ Quitမကြာသေးမီကစာအုပ်ရေးသားခဲ့သည် Tinder တွင်ချ Get လုပ်နည်း။ ဂျေးအန်သိုနီ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲ - အကျင့်ကိုဖျက်ခြင်းနှင့်သံသရာကိုချိုးဖျက်ခြင်း, အမေဇုံအပေါ်ရရှိနိုင်ပါ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုအားလုံးသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်း ၀ ယ်လိုအားကိုပပျောက်စေရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း NoFap အသိုင်းအဝိုင်းမှသူများကအကြံပြုလိမ့်မည်။ လူများစွာကလက်တွေ့ကျကျတွေ့ဆုံခြင်းသည်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိစိတ်ကူးယဉ်မှုများထက်ပိုကောင်းသည်ဟုသဘောတူကြလိမ့်မည်၊ သို့သော်လူများသည်ယင်းကိုဖျော်ဖြေရန်အလွန်ဆိုးရွားသလော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆန္ဒကိုအဘယ်အတိုင်းအတာအထိတားဆီးသင့်သနည်း။ ဥပမာလိင်ကွဲစုံတွဲများအကြားစအိုလိင်ကိုအင်တာနက်မစတင်မှီကြာမြင့်စွာကတည်းကကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြည့်နေရတာလဲ။ အချို့သောသူများသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ယုတ်ညံ့သည့်ပုံရိပ်များကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပြီး၊ NoFap ချည်နှောင်ခြင်းတွင်မကြာခဏပေါ်ထွက်လာသည့်အရာ၊ စိုက်ထူခြင်းများကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်တင်ခြင်းကဲ့သို့သောပြissuesနာများသည် ပို၍ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိစေသည်။
အဖွဲ့အစည်း သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပူးတွဲတည်ထောင်သူသောသီအိုရီအောက်မှာလည်ပတ် "Porn မေတ္တာတော်ကိုသတ်နိုင်ပါဘူး။ " တစျခုမှာလူအများစုဆေးလိပ်သောက်စီးကရက်သူတို့တက်ပွင့်လင်းမီကပင်ထိုသူတို့အဘို့ဆိုးရွားနေကြသည်ကိုသိသောရှင်းပြသည်။ သူဟာတစ်နေ့မှာလူတွေကိုအလားတူအလငျး၌ညစ်ညမ်းမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။
porn စွဲနေတဲ့ရှုပ်ထွေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအများကြီးပိုသုတေသနကျမတို့ကလည်းဘယ်နိဂုံးချုပ်ထံသို့မလာနိုငျမတိုင်မီကောက်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကျွန်တော်ဝန်ခံနိုင်ပါတယ် porn စွဲရှိရာ porn စွဲတည်ရှိကြောင်း နိုင် မတည်ရှိ။ ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ကိုပထမနေရာအတွက်လုပ်ကြဖို့ခွင့်ပြုသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တန်ဖိုးထားဖို့ခဏယူသင့်ပါတယ်။
Carrie Weisman လိင်ဆက်ဆံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့သူတစ်ဦး AlterNet န်ထမ်းစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပေးချက်များ, စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံပြင်ရှိသလား? သူမ၏ Email.